Zavamaniry fampifangaroana simenitra SjHZS75-3E serivisy ho an'ny mpanjifan'ny Myanmar | Shantui
Ny orinasa SjHZS75-3E dia mampifangaro simika amin'ny mpanjifa ao Myanmar
Ny zavamaniry mampifangaro beton-dranomasina Shantui Janeoo SjHZS75-3E dia nahavita ny famokarana entana mavesatra tamin'ny 9,2020 Oktobra. Nandritra ny torolàlana lavitra, dia manokatra lalana hamoronana lanja ho an'ny mpanjifa ao Myanmar.
Voakasiky ny toe-javatra nisy ny valan'aretina, ny injenieran'ny serivisy aorian'ny varotra dia tsy afaka nankany amin'ny tranokala Myanmar mba hitarika anao.Shantui Janeoo dia manome ny torolàlana lavitra amin'ny Internet hanomezana ny serivisy fametrahana sy komisiona. Noho ny fivoarana miadana amin'ny fananganana tranokala, dia miato ihany koa ny fametrahana, ny sampana mpanohana ny serivisy dia naharesy olana maro hitarihana ny mpanjifa am-paharetana. Taorian'ny asa mafy efa ho 4 volana dia nahatsapa famokarana mavesatra ny famokarana entana mavesatra farany ny zava-maniry SjHZS75-3E. Ny mpanjifa dia tena afa-po amin'ny vokatry ny fitaovana.
Amin'ny dingana manaraka, Shantui Janeoo dia hampiasa teknolojia vaovao hanatsarana ny fomba sy fitaovana fitarihana lavitra hanatsarana ny fahombiazan'ny torolàlana lavitra any ivelany ary hiantohana ny vokatra avo lenta ho an'ny mpanjifa amin'ny endrika manokana.